Ho an’ny hôpitaly Befelatanana manokana dia nahatratra 140 isa ireo ankizy noraisin’ny urgence pédiatrie tao anatin’ny roa volana. Raha araka ny fanazavan’ny dokotera mpitsabo zaza iray dia miatomboka amin’ny serisery kely ny aretina, mandalo amin’ny koha-maina ary manempotra ilay zaza mihitsy avy eo. Ny tena loza anefa hoy hatrany ity dokotera ity dia mahafaty ny aretina raha vao diso tara loatra ny fandraisana an-tanàna ny marary ka tsy tokony ho mandrimandry manana aretina izay Ray aman-dReny manan-janaka tojo izany. Ny fanatonana tobim-pitsaboana ihany raha ny nambarany no tena vahaolana tsara. Na dia viriosy miparitaka aza anefa no mahatonga ity aretina iray ity dia nomarihiny fa azo sorohina tsara izany. Ezahina ho tafidtry ny andro sy tsy mihiboka ny ao an-tokantrano, indrindra fa ny efitrano fatoriana. Fadiana ihany koa ny setroka raha mety sy ny fitondrana ny zaza amina toerana misy rivotra maloto.